समाज « Dhankuta Khabar
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ४१७ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ । निम्न विषयमा रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको
एम्बिसन राष्ट्रिय गौरव सम्मान–२०७६ बाट डा. गुरुङ र डा. रुइत सम्मानित
काठमाडौ । एम्बिसन एकेडेमी, बानेश्वरद्वारा आयोजित नयाँ विद्यार्थीहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. जगमान गुरुङ र वरिष्ठ नेत्रचिकित्सक डा. सन्दुक रुइतलाई एम्बिसन राष्ट्रिय गौरव सम्मान–२०७६ प्रदान गरिएको छ ।
भानु जयन्तीका अवसरमा कविता वाचन प्रतियोगिता,दुवै समूहमा मोक्षदा स्कुल प्रथम
काठमाडौ । २०६औँ भानुजयन्तीका अवसरमा कुमारीगालमा प्रोग्रेसिभ एजुकेसनल फोरम (पिइएफ)को सदस्य स्कुल महान् सिद्धार्थ हाईस्कुलद्वारा विद्यालयस्तरीय छन्द कविता वाचन प्रतियोगिता आयोजना गरियो । उक्त भानुभक्तीय कविता वाचन प्रतियोगितामा मोक्षदा स्कुल प्रथम
सप्तकाेशीमा पानी खतराकाे तहमा, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह
काठमाडाैँ । अविरल वर्षाका कारण खाेलानाला बढेपछि सप्तकाेशी नदीमा जलसतह बढेकाे छ । सप्तकोसी नदीकाे चतरामा आज असार २८ गते बिहान ६ बजे जलसतहले सतर्कता तह पार गरेको बाढी पूर्वानुमान
लुम्बिनी-कपिलवस्तु विस्व अभियानका विस्व संयोजक श्रेष्ठले गरे सेलिब्रेटीहरु संग भेट
काठमाडौ । लुम्बिनी-कपिलवस्तु विस्व अभियानका विस्व संयोजक रामकुमार श्रेष्ठले काठमाण्डौंको लाजिम्पाटस्थित होटल मनस्लुमा एक हप्ताको बसाइका क्रममा फरक फरक दिनमा बिभिन्न क्षेत्रका सेलिब्रिटिहरुलाई मात्रै भेटेनन, समाज बिकास संस्था नेपालका अनाथ
एक व्यक्तिको दुई तिर काजकिरिया : ६ छोरी एकातिर, भतिज अर्कोतिर
कृष्ण थपलिया, सर्लाही, २८ चैत । समाजको रुपान्तरण भएसंगै नेपालमा पनि नेपाली महिलाहरुमाथि लागेको विभिन्न किसिमका बन्देजहरु फुक्दै गयो । त्यस मध्येकै एउटा फुकुवा बन्देज बन्न सफल भएको थियो बाबुआमाको
यस्तो बन्यो माझी बस्ती : नयाँ नेपाल बनाउने अभियानमा सहयोगी मनकारी नायिका श्वेता खड्का
काठमाडौ । विनाशकारी भूकम्प पछि एकिकृत बस्ती बनाउने देशमा एक किसिमको लहर नै चल्यो । हेर्दा चिटिक्क देखिने ती सुन्दर घरहरु बनाउन साच्चै नै मनै लोभ्याउने खालका हुने गर्छन् ।
जिवन र मृत्युसंग लडिरहेकी मुटु रोगी एघार बर्षिया बालिकालाई सहयोगको याचना
दिपेश ईशारा राई,धरान । एक एघार बर्षिया बालिका मुटु रोगी भएपछि आर्थिक कठिनाईका कारण उनको उपचारमा समस्या आएकाले सहयोगको याचना गरिएको छ । भोजपूर जिल्ला हतुवागढी गाउँपालिका ६ साविक होमताङकी
उच्च रक्तस्राव भएकी महिलाको सेनाको हेलिकोप्टरबाट उद्धार
हुम्ला । हुम्लाको चङ्खेली गाउँपालिकामा एक महिलालाई अति रक्तस्रावको पीडा भएपछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ । सदरमुकाम सिमकोटदेखि तीन दिन टाढाको दूरीमा पर्ने चङ्खेली गाउँपालिका–५ वटा नेप्का गाउँकी
एकाबिहानै ऋषि धमलाको कार दुर्घटना,यस्तो छ अवस्था !
काठमाडौं – रिपोर्टर्स क्लव नेपालका अध्यक्ष एवम् पत्रकार ऋषि धमलाको कार दुर्घटनामा परेको छ । लाजिम्पाटस्थित निवासबाट नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यालय अनामनगर जाने क्रममा दुर्घटना भएको हो । आइतबार बिहान